दुलही लिन जाँदा भेरीमा हामफाल्न लाग्दा बाँचेर फर्केका नवारजका भाइले खोले घटनाको सबै पोल (भिडियो) – Online Nepal
काठमाडौं । रुकुम घटनाका सम्बन्धमा केही नयाँ कुरा खुल्दै आएका छन् । नवराज विकसंग उनको प्रेमिका भनिएकी युवतीलाई लिन संगै गएका उनका साथी गोविन्द विकले केही नयाँ कुरा खुलाएका छन् । त्यो दिन नवराज र ति युवतीको फोनमा कुरा भयो । फोनमा के कुरा भयो भन्ने ति साथीले थाहा त पाएनन् । तर नवराजले फोनमा कुरा सकिएपछि साथीलाई भने, वेहुली राजी भई ल लिन जाउँ भनेर भने । साथीले त्यती भनेपछि अरु साथीले केही पनि सोधेनन् ।
गाउँवाट सुरुमा ६ जना युवतीको गाउँतिर हिँडे । भेरीको पुलमा पुगेपछि अरु १६ जना थपिए । त्यसपछि फेरी ३ जना थपिएपछि २१ जनाको टोली भएर युवतीको गाउँ तिर जान भनेर हिँडे । तर विचैमा ३ जना फर्किए । अनि १९ जना मिलेर वेहुली लिन भनेर गाउँतिर गए । १२ वजे गाउँवाट हिँडेका उनीहरु साढे ४ वजेतिर युवतीको गाउँमा पुगेको पनि बताए ।
वडाध्यक्षको घर हुँदै युवतीको घर जानुपर्ने रहेछ । धेरै युवालाई देखेपछि वडाध्यक्षले यति धेरै युवा भएर किन आएको हो ? कहाँ जान लागेको भनेर सोधे । वडाध्यक्षले त्यसो भनेपछि उनीहरुले आफुहरु काफल खान आएको भनेर भने । वडाध्यक्षले त्यसो भए पानी खाएर जाउ भनेर भने । अलि पर एउटा कुवा थियो त्यहाँ पानी खायौं, अनि नास्ता खाएर घर जान भनेर वाटोमा झर्दै गर्दा माथिवाट आक्रमण भएको उनले बताए । तीनतिरवाट घेराहाल्दै गाउँले आएपछि भिरतिर भागेको उनले बताए ।
गोविन्द शाही, लोकेन्द्र शाही, टिकाराम सुनार र नवराजलाई भिरवाट हामफालेको मैले आफै देखेको हो उनले भने, म पनि भेरीमा हाम फालेको थिए तर आधावाटोमै मलाई समाते । मलाई पिटे म वेहोस भएँ, त्यस पछि के भयो मैले थाहा पाइन् । मलाई हँसियाको उल्टोतिरवाट हानेका थिए । यस अघि नवराजले युवतीलाई आफु कथित ठूलो जातको भनेर भनेको कुरा पनि ति साथीले खुलाएका छन् । सुरुमा आफुलाई अर्कै जातको भनेर युवतीलाई भनेको थियो । तर पछि कुरा खुेलेको हो । यस अघि पनि गाउँमा त्यसैगरी युवतीलाई लिन जाँदा स्थानियले प्रहरीकहाँ बुझाएका थिए । उनले भने, प्रहरीकहाँ बुझाउन लगेपछि नवराजले अब फेरी आउँदा अरुलाई पनि लिएर आउँछु र युवतीलाई उठाएर लैजान्छु भनेर चेतावनी दिएका थिए ।
नवराजकै साथी भन्छन्, २१ जना भएर जाँदा त्यो गाउँका मानिसले त्यही चेतावनी सम्झिएको हुनुपर्छ । उनीहरु युवतीको घर नजिकै पुगेपछि युवतीको आमाले तिमीहरु फेरी आयौ ? अस्तिनै प्रहरीकहाँ बुझाएको विर्सिसक्यौ भनेर भनेको उनले बताएका छन् । उनले त्यतीबेला जातिय अपहेलना हुने शब्द पनि प्रयोग गरेको ति साथीले बताएका छन् । सञ्चार माध्यममा विभिन्न कुरा वाहिर आएका छन् । मिडियामा आएका केही कुरा भने वास्तविकता भन्दा बढी आएको पनि बताइएको छ ।
Prevचीन-भारतले बढाए लद्दाखको सीमामा सुरक्षा फौज
Nextजाजरकोट घटना : मृ*तकको सङ्ख्या पाँच पुग्यो, बेपत्ता एकको खोजि जारी
टेलिकमका अ’धिकृतपु’त्रको अ’प’ह’र’ण’पछि ह’त्या